Alamino ny smartwatch sinoa handamina olana amin'ny fampandrenesana | Androidsis
Eder Ferreño | | Android Android, SmartWatch, Tutorials
Raha ora vitsy lasa izay dia natolotro anao ny Review of the Iradish X9 Y6, toy izany Apple Watch clone mifanaraka amin'ny Android sy iOS ary afaka mahazo latsaky ny 30 Euros isika, anjaran'ny fanitsiana kosa ny fampifanarahana ny fampandrenesana, koa hasehoko anao ny fomba ajanony ny olan'ny fampandrenesana ao a Smartwatches Sinoa miankina amin'ny fampiharana Bluetooth Notifier.
Ity vahaolana amin'ny olan'ny fampandrenesana ity amin'ny Smartwatches Sinoa izay miseho matetika aminay miaraka amin'ny rohy miaraka amin'ireo finday avo lenta izay manana Android Android Lollipop, dia manan-kery ho an'ny maodely sy marika marika Smartwatches Sinoa rehetra izay mampiasa ny fampiharana Bluetooth Notifier, izay manome olana be dia be ka tsy mampifanaraka ireo fampandrenesana voaray.
1 Ahoana ny fomba hananganana smartwatch sinoa ary hamahana ny olan'ny fampandrenesana
2 Ahoana ny fananganana smartwatch sinoa
3 Ahoana ny fampifandraisana ny smartwatch sinoa amin'ny Android
4 Fampiharana smartwatch sinoa tena ilaina
5 BT Notifier
Ahoana ny fomba hananganana smartwatch sinoa ary hamahana ny olan'ny fampandrenesana
Ao amin'ny horonan-tsary mifatotra amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao tsikelikely ny vahaolana amin'ny olan'ny fampandrenesana ao amin'ny Smartwatches Sinoa. Vahaolana tsotsotra toa ny manala ny fampandrenesana Bluetooth ary mametraka Smartwear, iray amin'ireo rindranasa ho an'ny Smartwatch Sinoa izay misy maimaim-poana tanteraka amin'ny Google Play Store amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy avelako eto ambany.
Miaraka amin'ny fametrahana tsotra ny akanjo fohy sy ny fanalana ny Bluetooth Notifier dia ahitsy isika ny olana fampandrenesana fampandrenesana rehetra amin'ny marika sy maodelin'ny smartwatches sinoa rehetra izay nampiasa Bluetooth Notifier.
Smartwear Izy io dia iray amin'ireo rindranasa mora indrindra ampiasain'ny smartwatch Shinoa sy hamboarina, tsotra na mihoatra ny Bluetooth Notifier ary amin'izany dia hahatratra ny fampifanarahana ny fampandrenesana rehetra izay mahatratra anay amin'ny Smartphone mifandraika amin'ny Smartwatch izahay, na dia avy amin'ny fikirakiran'ny rindrambaiko aza dia afaka manivana ny fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fampiharana ihany koa izahay vao hahazo ny fampandrenesana an'ny ireo rindranasa mahaliana antsika.
Na dia ao amin'ireto pikantsary avy amin'ny Google Play Store ireto dia hitanao fa miseho amin'ny teny sinoa ilay fampiharana, ny tena izy dia Voadika manontolo amin'ny teny anglisy izy io ary miasa tanteraka izy io ary mora takarina.
Ahoana ny fananganana smartwatch sinoa
Rehefa mividy smartwatch cino isika, iray amin'ireo antsipiriany voalohany izay mila raisinay ny rafitra miasa ampiasainao. Amin'ny tranga maro, marika no miloka amin'ny Wear OS, ny rafitra miasa novolavolain'i Google ho an'ireo fitaovana ireo. Raha izany no izy, dia tena tsotra ny fizotrany, satria tsy ho ela loatra ny fanaingoana. Mba hanaovana izany dia mila mampiasa ny fampiharana Wear OS amin'ny telefaona isika.
Raha vao sintonina ny fampiharana, mila mampihetsika Bluetooth amin'ny fitaovana roa isika ary amin'ny fampiharana Wear OS dia kitiho ny fanombohana Start. Avy eo dia tsy maintsy manaraka ireo dingana aseho eo amin'ny efijery fotsiny isika, mba hifandray ireo fitaovana roa ireo. Hisy hafatra hiseho eo amin'ny efijery izay milaza hoe Mifandray na mifandray, mba hahafantarantsika fa efa nitranga izany.
Raha vao mifandray, azontsika atao ny manamboatra an'ity smartwatch ity Amin'ny fomba tsotra. Avy amin'ny fampiharana Wear OS dia afaka manao an'io isika nefa tsy misy olana be loatra. Hamboarinay manokana ireo fiasa tianay hampiasaina amin'ny famantaranandro, mba hifanaraka aminy
Ahoana ny fampifandraisana ny smartwatch sinoa amin'ny Android
Taloha, raha ny hetsika nilaza fa tsy misy Android Wear na Wear OS ny smartwatch sinoa dia voatery nampiasa fampiharana hafa. Mampalahelo fa maro amin'izy ireo no nesorina tao amin'ilay magazay, toy ny Smart Wear na MediaTek Smart Device. Ny ampahany tsara dia ny fisian'ny rindranasa iray hafa ahafahantsika manatanteraka an'ity dingana ity, hampifandray ny famantaranandro amin'ny telefaona Android, ankoatry ny fiafaràn'ny olana fampandrenesana.
Momba ny Watch Droid Phone, izay efa afaka ho an'ny Android nandritra ny fotoana kelikely. Ity rindranasa ity dia manampy anay hampifandray ny smartwatch miaraka amin'ny rafitra fiasa Android amin'ny telefaona hahafahana mahazo fampandrenesana avy amin'ny rindranasao, hitantana ny famerenana mozika, handefa rakitra avy amin'ny telefaona mankany amin'ny smartwatch ary maro hafa. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ampidinintsika ny fampiharana fiambenana sy ny fampiharana an-tariby:
Mijery telefaona Droid
Developer: Rindrambaiko Lumatic
Jereo ny Droid Assistant
Vantany vao alaina ireo rindranasa roa, tsy maintsy manokatra ny rindranasa telefaona isika. Mampiseho amintsika ireo dingana tokony harahina hampifandraisana ny telefaona amin'ity rindrambaiko sinoa ity. Ka amin'ny dingana vitsivitsy dia efa ampifanarahina amin'ny fomba tsotra ireto fitaovana roa ireto, izay ahafahantsika manao ny ankamaroan'ny famantaranandro ity.
Fampiharana smartwatch sinoa tena ilaina
Betsaka ny rindranasa izay mety mahasoa ho an'ireo mpampiasa manana finday maranitra, mba hahafahan'izy ireo mahazo tombony betsaka amin'izany. Ny sasany amin'ireo fampiharana mahaliana indrindra dia:
Fampiharana tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa mivoaka hihazakazaka. Satria atolotray ho fampiharana mihazakazaka sy fanatanjahan-tena ianao, noho izany anananao manana firaketana tonga lafatra sy voafehy amin'ny fotoana rehetra anazaranay, miaraka amin'ny antsipiriany rehetra izay manan-danja amin'ity lafiny ity. Azonao atao ny manana fizahana fanatanjahan-tena tsara noho ity fampiharana ity.
Ilay fampiharana fampiharana mandeha ho azy malaza, izay manampy antsika handamina dingana maro amin'ny telefaona na isan'andro. Ho fanampin'izany, azontsika atao ihany koa ny mampiasa azy amin'ny smartwatch, ho fampiasana bebe kokoa amin'ny fotoana rehetra. Ka izany dia fampiharana izay azo antoka fa ilaina amin'ny mpampiasa maro.
Developer: IFTTT, Inc.
Ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra malaza dia mifanaraka amin'ny smartwatch, mba hahafahantsika mahita ny hafatra rehetra azontsika amin'ny fiambenana amin'ny fotoana rehetra. Araka izany, tsy ho diso mihitsy ny fampandrenesana ao aminao, indrindra raha efa nanao spaoro ianao tamin'ny fotoana sasany.
Developer: Telegrama FZ-LLC
Ity fampiharana ity dia mahazatra amin'ny rindrambaiko sinoa, fa amin'ny tranga maro dia mety miteraka olana, toy ny amin'ny fampandrenesana. Noho izany, ny tolo-kevitra dia ny fanesorana azy amin'ny famantaranandro. Indrindra satria afaka mampiasa fampiharana hafa izay hiasa tsara kokoa isika, toy ny Droid Watch, izay manome antsika asa mitovy amin'izany, ankoatry ny fananana asa fanampiny, izay tsy hiteraka olana amin'ny fiasan'ny famantaranandro.
amin'izao fotoana izao afaka misintona Bluetooth Notifier avy amin'ny Google Play ianao, izay mbola misy. Na dia ratsy indrindra aza ny naotin'ny mpampiasa, dia mazava fa fampiharana tsy dia maharesy lahatra loatra sy manome ny zava-bita andrasana. Ny tsara indrindra dia ny tsy hampiasa azy io amin'ny smartwatch Sinoa anao.
Manantena izahay fa afaka aorian'ity lesona kely ity manangana smartwatch sinoa ary ny olana amin'ny fampandrenesana dia namboarina. Raha nahita fomba hafa ianao hanamboarana ity bibikely manelingelina ity dia ampahafantaro anay ny fomba nanaovanao izany tamin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Android Android » Ahoana ny fomba hamahana ny olana amin'ny fampandrenesana amin'ny Smartwatches Sinoa
77 hevitra, avelao ny anao
Benzema dia hoy izy:
Fisehoan-javatra ianao !!! Tsara ilay app !!
Misaotra ny fizarana ??
Mirary ny soa indrindra?
Valiny tamin'i Benzema
Master install ary ny marina dia io no hany app izay nahazoako fampandrenesana, fa ny olana dia tsy mahazo ny fampandrenesana fotsiny avy amin'ny rafitry ny telefaona aho, tsy misy fampandrenesana avy amin'ireo rindranasa voalamina ary nanandrana ny zava-drehetra aho, tsy nanao izany aho mahay manao azy. misy fambara?
Telefaona inona no anananao? Toy izany koa no mitranga amiko amin'ny moto g 2014
Roberto encinas dia hoy izy:
Namana Manana olana aho tsy fantatry ny fampiharana ny famantaranandro: / inona no azoko atao
Valiny tamin'i Roberto Encinas
jart2 dia hoy izy:
Salama, afaka mamaha azy ve ianao?
Mamaly an'i jart2
Marian dia hoy izy:
Manana KSIX Smart Watch aho, ampifandraisiko amin'ny bluetooh, miasa mandritra ny dimy minitra voalohany ary very ny famantaranandro BT, ny findaiko dia modely Samsung GALAXY Ace GT558391 Android version 2.3.6.
Mangataka fanampiana aho
Mamaly an'i mariano
Elisabeth dia hoy izy:
Nividy smartwatch sinoa aho, nampifandray ny Bluetooth an'ny LG Cel tonga lafatra nataoko izany fa tsy nampifandray azy io. Novakiako ny soso-kevitra rehetra nivoaka momba izany, saika ny fampiharana rehetra no nampiasako ary tsy nisy.
Rehefa nanara-maso ny toeran'ny sela aho dia maty ny "toerana". Natodiko io ary voavaha ilay olana. Nifandray avy hatrany izy ireo ary nampiasa ilay fampiharana natolotry ny mpanamboatra fiambenana fotsiny.
Manantena aho fa hanompo anao ny zavatra niainako.
Valio amin'i Elisabeth
antontany dia hoy izy:
Salama, faly aho fa nanampy ahy betsaka ilay alikaola fa tiako ny manova ny tarehin'ny famantaranandroko sinoa, ny maodely dia W3, azo atao ve izany, afaka manampy ahy ve ianao? Misaotra fa miandry ny valinteninao aho
Mamaly an'i pilo
Nelson dia hoy izy:
Ny intale dia mahazo vitsivitsy aho ary manary ahy hadisoana izany na tsy mampifandray ny solo-saiko fotsiny ihany no s5
Valiny tamin'i Nelson
heidy dia hoy izy:
Manana famantaranandro a8 aho ary amin'izao fotoana izao dia tsara ny fampandrenesana, ny olako dia tonga amin'ny fanaingoana azy, satria tsy misy fomba hametrahana na inona na inona amin'ny samrtwatch
Mamaly an'i heidy
Tsy mandeha amin'ny smartwatch GT08S miaraka amin'ny telefaona LG G3 misy Android 5.0 lollipop.
metroqis dia hoy izy:
Manana One Touch Pop C7 aho ary mandeha tsara ihany koa mandritra ny andro vitsivitsy ary avy eo mijanona tsy miasa ary tapaka intsony.
Valio ny metroqis
Abel Sanabria dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, mandeha amin'ny antsasaky ny s5-ko izy, ary miaraka amin'ny lenovo A2010 dia milalao feo fotsiny izy fa tsy mampiseho na inona na inona
Valiny tamin'i Abel Sanabria
Misaotra amin'ny fampidirana. Tsy namela ahy ny fametrahana azy, mahazo error 505 aho fa tsy azo apetraka, inona no azoko atao? Misaotra anao
Esory ny rindranasa hafa izay anananao amin'ny telefaoninao mifandraika amin'ilay smartwatch ary apetaho SmartWear.
HeM dia hoy izy:
u8 miaraka amin'ny s7 niasa tonga lafatra! Misaotra anao!
Valiny amin'i HeM
Arturo Xavier dia hoy izy:
Manana S7 aho ary tsy afaka mampifandray azy, mihaona ary manapaka indray, afaka misy manampy ahy ve?
Valiny tamin'i Arturo Xavier
Famantaranandro iray isaky ny sinoa ary sinoa iray isaky ny famantaranandro.
angel aragon ortega dia hoy izy:
Manana GR08 aho ary tsy voalamina ireo fampandrenesana
Mamaly an'i angel aragon ortega
Luis Barrios dia hoy izy:
Salama, afaka manampy ahy ve ianao, avy any Venezoela aho, manana maodely U8 ary apetrako amin'ny takelaka Android na fitaovana Android hafa ary tsy takatry ny rindranasa SmartWear ny fitaovana U8. Ny telefaona dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny Bluetooth fa amin'ny app dia azoko fa tsy milaza hoe tsy mahomby "SmartDevice connect Fail" dia nanandrana ny fampiharana rehetra aho ary tsy nisy.
Ny mailaka: lualba.420@gmail.com
Valiny tamin'i Luis Barrios
Carolina Soto Silva dia hoy izy:
Faly satria miasa tsara ho ahy ilay fampiharana. Sony Xperia C4
Valiny ho an'i Carolina Soto Silva
josemi dia hoy izy:
tsara, manana no1 g3 sy ilay fundo fangatahana aho, miaraka amin'izay momba ny fahatongavan'ireo fampandrenesana dia tsy manana olana aho. Ny olana dia tonga rehefa manandrana mamaky azy ireo amin'ny smartwatch aho ary tsy fantatro raha manontany be loatra aho, saingy efa namaky hevitra nilaza aho fa afaka mamaky whatsaps sy ny hafa ianao. Ny zava-misy dia hitako izay fampandrenesana ananako, saingy tsy mamela ahy hamaky ireo hafatra ireo. Izay afaka mahazo tariby amiko?
Mamaly an'i josemi
Salama Josemi. Manana olana mitovy amin'ity smartwatch ity aho. Hitako ohatra fa manana hafatra WhatsApp 7 avy amin'ny chat 3 samihafa aho. SUV na izany aza tsy haiko ny mamaky na dia iray aza amin'izy ireo.
Nahavita nanamboatra azy ve ianao?
Izany koa no mahazo ahy, fampandrenesana fotsiny fa tsy afaka mamaky azy ireo aho. Namaky tamin'ny pejy iray aho fa misy famantaranandro sasany tsy ampiasaina hamakiana fotsiny mba hampandrenesana 🙁
Nina dia hoy izy:
Tsy misy intsony ny APP 🙁
Valiny tamin'i Nina
Salama, misaotra betsaka amin'ny info, fa tsy misy ilay horonan-tsary. 🙁
Salama Luis. Izaho dia manana olana mitovy amin'ny smartwatch ihany. Nahavita namaha azy ve ianao? Hitako fa manana hafatra ohatra 7 avy amin'ny chat 3 aho, saingy tsy mahay mamaky na dia iray aza ...
Misy dikan-tenin'ny Smartwear App ho an'ny iPhone?
Ahoana no fomba ahazoako whatsapp amin'ny GTO8 miaraka amin'ny iPhone?
Valiny tamin'i Anto
Deiby Cobo dia hoy izy:
salama namana hitako ny fanontanianao raha misy app hampifandray GT08 amin'ny iphone dia manana an'io fanontaniana io ihany aho raha fantatrao ny fisaorako anao
Valiny tamin'i Deiby Cobo
Josepo dia hoy izy:
Salama, rahampitso tolak'andro, manana kw18 fitafiana mpanjaka aho ary te hanampy tarehy hiambina azy.
Valiny tamin'i Josepo
Salama, manana iPhone 6s aho, fampiharana inona no ampiasaiko?
Mamaly an'i eduardo
Jose Ricardo dia hoy izy:
Salama..! misaotra tamin'ny fanazavanao. Manana fisalasalana aho. Amin'ny telefaona sy amin'ny famantaranandro dia samy miseho mifamatotra avokoa, na izany aza tsy hitan'ny fampiharana ilay famantaranandro. U8 io.
Tiako ny valiny mahasoa raha azo atao. Misaotra anao
Valiny tamin'i José Ricardo
juanan dia hoy izy:
salama. miala tsiny aloha sao sendra ny fanontaniana apetraka amin'ny toerana mety (fa tsy hitako izay hametrahana azy) nividy smartwatch sinoa ho an'ny zanako vavy ary hita fa tsy manana espaniola izy, mety izany azo atao ny manampy azy amin'ny fomba sasany. Misaotra anao .
Mamaly an'i juanan
Andrea hatoka dia hoy izy:
Salama, manana A1 aho ary ny feon'ny whatsapp ihany no tonga fa tsy ny hafatra, mila vahaolana aho
Mamaly an'i Cuello andrea
Lois david dia hoy izy:
Toy izany koa no mahazo ahy Andrea, ianao no namaha izany, ampahafantaro ahy?
Valiny tamin'i Lois David
Guillermo Santiago dia hoy izy:
Ny smartwash-ko dia tsy maoderina ary rehefa mi-scan code qr aho dia mandefa ahy hilalao fivarotana nefa tsy avelako hisintona ilay notifier bt voalohany. Azonao atao ve ny manampy ahy hahita raha avelanao handamina azy aho? Misaotra betsaka mialoha.
Valiny tamin'i Guillermo Santiago
Andrea Neck dia hoy izy:
Salama, tsy nahavaha azy aho, ny email-ko dia andrea_itaty @ hotmail. com, mila fanampiana aho
Valiny tamin'i Andrea Cuello
Solomona dia hoy izy:
Salama aho mila fanampiana, manana smartwatch sony 3 aho ary amin'ny rindrambaiko sasany dia manome ahy hadisoana mifanindry amin'ny famantaranandro iray ihany azafady
Mamaly an'i Salomon
Salama maraina tsy fantatro raha ho toerana mety hanaovana izany fangatahana izany. Nividy smartwach sinoa ho an'ny zanako vavy aho ary tsy mitondra ny teny espaniola izy. mety misy azo atao ve ny manampy an'io? .Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao. Misaotra anao.
Manana fangatahana aho, manana j7 aho ary manana smartwatch gt08 ary tsy afaka mamaky ny fampandrenesana whatsapp, na izany aza raha afaka mamaky ireo tonga ao amin'ny facebook messenger aho, misy ve ny vahaolana? Manana rindranasa napetraka miaraka amin'ny kaody qr amin'ny famantaranandro aho
Mbola manana ny fisalasalako momba ny No.1 G3 sy ny whatsapp aho
Ny fampandrenesana fotsiny no ahitako fa manana hafatra amin'ny whatsapp aho fa tsy afaka mamaky azy ireo. Misy vahaolana ve?
Elizabeth dia hoy izy:
Valiny tamin'i Elizabeth
Fantatrao ny KW88 Smartwatch, azonao atao ve ny milaza amiko raha tsara toy ny nandoko azy tamin'ny dokam-barotra momba ilay vokatra.
Sebastian Andres Galaz Ponce dia hoy izy:
Salama tsara 2 andro lasa izay nividy smartwatch U8 Ary manana ny olana aho fa tonga amiko ireo fampandrenesana ary afaka mamaky azy ireo aza aho nefa tsy maneno na mihozongozona ny famantaranandro rehefa tonga izy ireo ary tsy hitako izay hatao raha afaka manampy izy ireo izaho, ny mailako dia sebastian.galaz93@gmail.com
Valiny tamin'i Sebastian Andres Galaz Ponce
ester dia hoy izy:
Salama, nividy dz09 aho fa tsy avelako hametraka whatsapp na facebook, na koa ny browser, efa manana puce izy mba hiasa tsirairay avy amin'ny finday, fa mandefa ahy amin'ny browser hijerena fa manome hadisoana, afaka manampy ahy ve ny olona?
Mamaly an'i ester
Gaston dia hoy izy:
Salama, tolak'andro tsara, azafady mba ampio aho azafady? Manana iPhone aho ary ny fiambenana dz09 dia miasa fotsiny ho an'ny antso, ary misy hafatra tonga, fa tsy misy fampandrenesana azo jerena, ary novakiako tamin'ny lafiny maro fa raha azony atao, farafaharatsiny mamaky hafatra an-tsoratra sy Whats App, manantena aho fa hanampy, misaotra miarahaba
Mamaly an'i gaston
Tsy mahazo fampandrenesana na inona na inona aho. Tonga amiko ny antso fa tsy tonga ny whatsapp. Efa nanandrana an'io rindranasa io aho ary maro hafa no tsy mandeha. Manome ny famantarana fa mifandray izy io fa tsy tonga ny whatsapp: \_
Manana gt08 aho ary tonga tokoa ny antso fa ny fampandrenesana dia tsy momba na inona na inona na wahtsapp na zavatra hafa. Efa nanandrana ity app ity sy ny maro hafa aho, saingy tsy misy na inona na inona miasa ho ahy, efa nahita tutorial maro aho, vitako ny zava-drehetra sy ny fampandrenesana nefa tsy tonga aho. Misaotra
Andramo Mediatek SmartDevice. Manao tsara aho.
Afaka mamaky ilay wathsapp aho
Nividy famantaranandro marani-tsaina aho ary tsy afaka mamaky ny hafatry ny dadatoako izay Sinoa. Ahoana no isaorako anao MILA FANAMPIANA AHO
Avelako ho anao ny mailako.
Kevin dia hoy izy:
Manana famantaranandro aho, no.1 g6 ary tsy afaka mampifangaro ilay famantaranandro amin'ny findaiko aho, ary manana moto g4 plus aho
Mamaly an'i kevin
Anthony M Benavides L dia hoy izy:
Mila mpitaiza amin'ny famantaranandro kw88 aho azafady mba ampio ny mailakao dranthonymbl@gmail.com
Valiny tamin'i Anthony M Benavides L
Salama. Manana gt08 sy android 6.0.1 aho efa nametraka saika ny apk rehetra ary tsy mandeha izany. Amin'ny tranga sasany dia mampahafantatra ahy izy io fa tsy mamela ahy hamaky ny whatsapp. Misaotra fanampiana
Charli dia hoy izy:
Salama, manana k88h aho ary afaka roa andro lavorary ... rehefa averiko io dia mijanona eo amin'ny efijery mampifandray ny andro fahatelo. ..ary mandraka androany ... nisy olona nitranga? ... hainao ve ny mamerina azy. .. io dia manana ny feon'ny famantaranandro manao ny ...
Valiny tamin'i Charli
Cruz dia hoy izy:
Manana iray mitovy aho ary zavatra mitovy no mitranga amiko
Valiny tamin'i Cruz
MISY MAHAY mampifandray azy amin'ny iphone ????
anghy dia hoy izy:
Ny dz09 -ko dia tsy mitondra hanova ny fiteny avy amin'ny teny anglisy ho amin'ny Espaniôla, inona no ataoko
Valio ny anghy
Cleo dia hoy izy:
misy rindrambaiko ho an'ny fifaliana marani-tsaina mifanentana amin'ny android 7.0?
Mamaly an'i cleo
Satroboninahitra Carlos dia hoy izy:
Manana Smart Watch q18 aho fa ny fakan-tsary mampiseho ny sary etsy ambony. Tsy haiko ny fomba hamahana azy?
Valiny tamin'i Carlos corona
tanana ankavanana dia hoy izy:
Nividy Smartwartch aho, ary nasiako BTNotification ho azy ary mety amiko izany. Tsy fantatro hoe iza no tompon'andraikitra amin'ity pejy ity, azoko antoka fa tsy liana izy ireo, nahita hevitra aho ary tsy namaly izy ireo tokana. Fa maninona no atao ireo zavatra ireo, fa tsy manampy, Ho vola ve no anaovanao azy? Miasa ihany koa ny MediaTek, fa ao amin'ny Wsap dia tsy mahita ny fampandrenesana ny msg fotsiny ianao fa tsy ny lahatsoratra fa normal. Fanontaniana… .. efa afaka nanetsika ny internet. Alefaso amin'ny famantaranandro ny fifandraisana ary ampiasao izy ireo miaraka amin'ny finday tapaka avy ao amin'ny BT ?... Misy fanontaniana, valiako izy ireo. Misaotra anao.
Mamaly an'i dchacon
juani dia hoy izy:
Salama, nanandrana nametraka fampiharana maromaro aho ary tsara ny fifandraisana, ny antso ary ny fampandrenesana fa tsy hitako ny hafatra avy amin'ny wassap. Afaka manampy ahy ve ianao. Manana Bt2 U8 aho
Mamaly an'i juani
juanma dia hoy izy:
Vao avy nividy famantaranandro marani-tsaina n but1 S9 aho fa amin'ny fampandehanana ny motorola G3 android 6 dia tsy mandeha amiko. Nanandrana tamin'ny samsung miaraka amin'ny Android v aho. 4.2 ary eny dia mandeha izy.
Nisy olon-kafa nitranga ve izany? aiza no hahalalako bebe kokoa….
Mamaly an'i juanma
Hols Tiako ho fantatra ny fomba ahitako an'io amin'ny smartwach misy SIM. Amin'ny alàlan'ny Bluetooth dia vitako izany fa tsy amin'ny karatra sim. Sinoa ... DAM G3. Misaotra anao
Maurito dia hoy izy:
Vantany vao nahavita nanamboatra ny smartwatch sinoa aho rehefa avy nandinika pejy 200 ary tsy hisy hiasa ho ahy ny iray amin'izy ireo. Nahazo ny safidy Setting fotsiny aho-> Fampandrenesana BT -> google play avy amin'ny fiambenana. Avy teo dia nisy kaody QR niseho teo amin'ny efijery famantaranandro ary notsimbiniko tamin'ny alàlan'ny rindranasan'ny kaody QR izay nakariko tao amin'ny google play. Amin'izany dia mandefa ny tenako any amin'ny adiresy google play of the BT Notification aho, izay ilay kinova izay nahatonga io famantaranandro io hiasa 100%. mahafinaritra izany. Manantena aho fa manampy anao izany.
ps: ny findaiko dia LG Bello modely puce double 2015 u = ary ny smartwatch dia tsy milaza amiko kaody na zavatra hafa. Ka tsy haiko ny dikanteninao na ny maodelinao: V
Mamaly an'i Maurito
Tsy mety amiko na amin'ny app na inona na inona, ny fiambenana dia lemfo lf1 ary ny oneplus3 finday.
Erick vazquez dia hoy izy:
Miala tsiny fa namaky ny hevitrao aho ary manana olana mitovy amin'izany, manana smartwatch u8 aho ary Moto G4 miaraka amin'ny android 7.0 ary azoko atao ny mampifandray azy amin'ny Bluetooth, fa efa nanandrana ny rindranasa rehetra avy amin'ny fampandrenesana Bt (amin'ny kinova rehetra), Smart Watch, Smart Watch Helper, Mediatek SmartDevice, Smart Wear. Ireo no rindranasa notadiaviko fa tsy misy, izy rehetra ireo dia mahazo lesoka aho, ny sasany amin'ireo rindranasa mifandraika nefa rehefa tonga ny fampandrenesana amin'ny telefaona finday dia manamarika lesoka ny fangatahana ary mikatona tsy ampoizina.
Inona no amporisihinao.
Ampifandraiso izao ny Smart Watch amin'ny telefaona finday hafa amin'ny lollipop android 5.0 sy amin'ny app fampandrenesana Bt (ilay mangataka ny Smart Watch) ary mifandray tsara izy io ………
Valiny tamin'i Erick Vazquez
D. Mérida dia hoy izy:
Rahampitso tolak'andro Francisco, nividy ny Kingwear kw88 aho ary manana olana amin'ny fampifandraisana ny famantaranandroko amin'ny Samsung galaxy note 4. Nanaraka ny fampianarana video anao aho, saingy tsy afaka ampiarahako amin'ny fampiharana Android akanjo tsy mahalala ny famantaranako, efa nanana napetraka Miaraka amin'ny famantaranandroko taloha, ny Sony smartwatch 3, ny fampiharana fitafiana Android ary fantatro izany, ary tsy azoko atao ny miseho ny kw88 ao amin'ny naoty hampiarahako azy. Manana fomba hafa hampifandraisana azy ve ianao?
Misaotra betsaka ary miarahaba, mpanaraka anao ao amin'ny fantsonao YouTube aho.
Valiny tamin'i D. Mérida
Salama, avy any Panama aho, najanoko ny pejinao mahafinaritra, manana olana aho ary tiako ho fantatra raha afaka manampy ahy ianao manana famantaranandro manbo 2 avy amin'ny orinasa mpamonjy aina fa nividy azy tany Chine aho izao manana olana amin'ny ny rindranasa ary tsy afaka nahazo iray mifanentana aho ary nampidina ny Inona no omen'ny orinasa ary tsy misy azonao ampiana ahy hisaotra anao
Jose silva dia hoy izy:
Tsy avelako hisintona ny rindranasa sy handalo ilay kaody, hoy izy tamiko, ary tsy hita koa ilay singa
Mamaly an'i Jose silva
pelayo dia hoy izy:
Manana ny smartwatch dz09 aho tato ho ato, nametraka karatra finday tao aminy aho ary tsy mahazo internet misintona whatsapp, facebook ary twitter
Mamaly an'i pelayo
Salama, nividy DZ09 aho ary efa nanandrana ny rindranasa rehetra fantatro fa afaka mamaky ny lahatsoratr'ilay whatsapp satria mampitandrina ahy ny amin'ny fampandrenesana sy ny hoe iza no mandefa azy saingy tsy misy dikany ny lahatsoratra. Azoko fa ao anatin'io smartwatch io dia azonao atao ny mahita ny lahatsoratr'ireo fampandrenesana, raha ny marina. Lahatsary hitako. Ao amin'ny oneplus iray ananako dia manana ny tsipika os lineage an'ny Android napetraka. Te hahafantatra aho raha misy vahaolana hamahana ny olana. MISAOTRA
Rebecca Chambers dia hoy izy:
Salama, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, manana ny fiambenana dz09 sy Moto g5plus aho, nampidina ny application ary milamina ny zava-drehetra fa rehefa napetraka ny fisoratana (efa miseho ny fisie izay ananako amin'ny telefaona mba hahatratra ahy ilay fampandrenesana. ), ny famantaranandro dia miseho ho tapaka, izany hoe mifandray amin'ny alàlan'ny bluetooth izy ary eo amin'ny sehatry ny telefaona no isehoany fa tsy ao amin'ny app, ahoana no fomba hamahako azy?
Valiny amin'ny RebecaChambers
Manana olana amin'ny U8 aho, rehefa ovako ny fiteny amin'ny Espaniôla ny andro misy ny daty dia miseho foana amin'ny Alatsinainy, mandalo ny andro ary mbola tsara ny isan'ny daty fa ny Alatsinainy ihany ny andro, amin'ny teny Anglisy miasa tsara ilay daty ho ahy ary raha miova. VONJEO !!!!!!!
Ny fanontaniako dia ny famelomako ireo fampandrenesana fa raha mamelombelona ny antso aho dia tsy afaka mandray izany amin'ny famataran-telefaona fotsiny fa tsy amin'ny telefaona ...
Manana dz09 aho nefa miraikitra be dia be ary tsy maintsy esoriko ny batery hanombohana azy indray, ny tsikaritro dia miakatra ny bateria ary misy fifandraisana diso.
Misy mahalala ve raha mitaona azy hihidy ilay stack?
Mamaly an'i rafael
Yaniré dia hoy izy:
Tsy haiko raha misy afaka manampy ahy amin'ny famantaranandro p70, efa zatra nampiasa WHATSAPP PLUS ho an'ny lohahevitra sy izany rehetra izany aho, saingy ny famantaranandroko dia tsy mahazo hafatra miaraka amin'inona, tokony ho WhatsApp Original izy io afaka mandray fampandrenesana.
Misy mahalala rindranasa na zavatra ahafahako mahazo ny zavatra apetraka amin'ny WHATSAPP PLUS?
Mamaly an'i Yaniré
Ny Moto Z4 dia ofisialy miaraka amin'ny Snapdragon 675 sy efijery OLED 6,4 "
Efa fantatsika ny datin'ny famolavolana ny Huawei Mate 30 Lite